Otú A Na-esi Asụgharị Akwụkwọ n’Ihe Karịrị Narị Asụsụ Asaa na Iri Ise
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
ISIOKWU TETA! A | IME KA NDỊ NA-ASỤ ASỤSỤ DỊ ICHE ICHE NỤ OZI ỌMA
Otu akwụkwọ kwuru na ndị mmadụ na-ekwu mgbe ụfọdụ na o nweghị ọrụ siri ike ka ọrụ nsụgharị.
NDỊÀMÀ JEHOVA na-ebu ụzọ hazie ihe ha chọrọ ibipụta, meere ya nchọnchọ, ma dee ya ede tupu a malite ịsụgharị ya. Ọ bụ n’isi ụlọ ọrụ ha dị n’Amerịka ka ndị na-edere ha ihe na-anọ ahazi ihe ndị ahụ. Ha na-enyocha ihe niile e dere mara ma hà bụkwa eziokwu, chọpụtakwa ma hà dị otú asụsụ Bekee kwesịrị ịdị. *
Ndị ahụ na-edere ha ihe dechaa, ha ezigara ọtụtụ ndị nsụgharị ha nọ́ n’ebe dị iche iche ihe ndị ahụ ha dere. Ọtụtụ n’ime ha nọ n’ebe a na-asụ asụsụ ha na-asụgharị ya. Onye nsụgharị ọ bụla ga-amarịrị asụsụ ọ na-asụgharị, marakwa Bekee.
OTÚ E SI ARỤ ỌRỤ NSỤGHARỊ
Anyị ga-eji ihe ndị a e sere ebe a kọwaa otú e si asụgharị Teta! n’asụsụ Spanish
A na-ede Teta! Bekee n’isi ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị n’Amerịka ma zigara ya ndị nsụgharị nọ na Spen
Onye nke ọ bụla n’ime ha na-aga leruo ihe ahụ e ziteere ha anya nke ọma
Ha niile na-ezukọ kwurịta ihe ndị ha chọpụtara na nke Bekee ahụ tupu ha asụgharịwa ya
A sụgharịwa ya, ha niile na-agbakọ aka hụ na ihe ahụ doro anya, na ọ bụ otu ihe ka ya na nke Bekee na-ekwu, na e dere ya otú e si ede asụsụ Spanish, na ọ dịkwa otú ndị Spanish si ekwu okwu
A sụgharịchaa ya hụ na ọ dịla mma, e zigara ya ndị ga-ebi ya. E bichaa ya, e bugara ya ndị bi n’ebe dị iche iche
Ndị niile na-asụ Spanish nọ́ n’ebe dị iche iche na-enwetazi ya, gụọ ya, ihe dị na Baịbụl e si otú ahụ baara ha uru
Olee otú ndị nsụgharị na-esi arụ ọrụ ha?
E nwere otu nwoke Onyeàmà Jehova aha ya bụ Geraint a gbara ajụjụ ọnụ. Ya na ndị ọzọ na-arụ ọrụ nsụgharị na Briten. Ka anyị hụ ihe o kwuru gbasara otú ha si arụ ọrụ. “Ihe na-akacha enyere anyị aka bụ ịrụkọ ọrụ ọnụ. Anyị na-agbakọ aka chọpụta otú anyị ga-esi asụgharị ihe ndị tara akpụ. Anyị na-ebu ụzọ chọpụta ihe okwu ndị dị n’otu ahịrịokwu pụtara, chọpụtakwa ihe a chọrọ ka onye ga-agụ ya ghọta, dezie ya otú ndị anyị na-asụgharịrị ya ga-enwe ike ịghọta ya.”
Olee otú ndị nsụgharị na-achọ ka ihe ha na-asụgharị dị?
“Anyị na-achọ ka ihe anyị na-asụgharị dị ndị ga-agụ ya ka ọ̀ bụ asụsụ ha ka e ji dee ya na mbụ, ka ọ gharakwa ịdị ha ka ihe a sụgharịrị asụgharị. N’ihi ya, anyị na-agbalị ịsụgharị ya ka ọ dị otú ha si ekwu okwu. Ha na-agụ ihe ahụ, ya ana-atọ ha ụtọ, uche ha adịrịkwa na ya.”
Olee uru dị ná ndị nsụgharị ibi n’ebe a na-asụ asụsụ ha na-asụgharị?
“Ọ na-enyere anyị aka ịna-asụgharị ihe otú ndị na-agụ ya ga-aghọta ya. N’ebe a anyị bi, anyị na-anụ otú ndị anyị na-asụgharịrị ihe si asụ asụsụ kwa ụbọchị. Anyị na-enwekwa ike ịjụ ha otú ha si aghọta okwu ụfọdụ anyị na-edere ha iji mara ma ọ̀ na-edokwa ha anya, ya abụrụkwa otú ha si ekwu okwu. Ime otú ahụ na-enyere anyị aka ịma otú anyị ga-esi asụgharịrị ha ihe dị na Bekee.”
Olee otú unu si hazie ọrụ unu?
“E nweta ihe ọ bụla a ga-asụgharị, a na-enye ya ndị ga-asụgharị ya. Onye nke ọ bụla n’ime anyị na-ebu ụzọ gụọ nke Bekee, ghọta ihe ọ na-ekwu, nakwa ndị e bu n’obi dee ya. Anyị na-ajụzi onwe anyị, sị: ‘Gịnị ka ihe a na-ekwu maka ya? Gịnị ka e bu n’obi dee ya? Olee ihe a chọrọ ka onye ga-agụ ya mụta?’ Ihe ndị a na-enyere anyị aka ịma otú anyị ga-esi asụgharị ihe ahụ.
“Anyị na-ekwurịtazi ihe ndị anyị chọpụtara, jụọkwa onwe anyị ajụjụ ndị a: Ànyị aghọtala isiokwu a nke ọma? Olee otú anyị ga-esi asụgharị ya ka ihe ọ pụtara bụrụ ihe nke Bekee pụtara? Anyị na-agba mbọ ka otú obi ga-adị onye ga-agụ ihe anyị sụgharịrị bụrụ otú ọ ga-adị onye ga-agụ nke Bekee.”
Olee otú ndị nsụgharị si arụkọ ọrụ?
“Anyị na-achọ ka ihe anyị sụgharịrị dị́ otú ọ ga-abụ a gụọ ya, a ghọta ya ozugbo. N’ihi ya, anyị na-agụpụta paragraf ọ bụla anyị sụgharịrị ugboro ugboro.
“Otu onye n’ime anyị ga na-edenye ihe a na-asụgharị na kọmputa. Anyị na-eleru ihe ahụ e dere anya ka a ghara iwepụ ihe ma ọ bụ tinye ihe. Anyị na-elezikwa ya anya iji mara ma è detara ya, marakwa ma ọ̀ bụ otú e si ekwu ya. Otu onye n’ime anyị na-agụpụtazi paragraf ahụ, ndị nke ọzọ ana-ege ntị. O nwee ebe siiri ya ike ọgụgụ, anyị agbalịa chọpụta ihe kpatara ya. A sụgharịchaa ihe ahụ niile, otu onye n’ime anyị agụpụta ya, ndị nke ọzọ ana-akanye ihe n’ebe ndị ha chere a ga-emezi ihe.”
Ọ dị m ka ihe a abụghị obere ọrụ
“Ọ bụghị obere ọrụ. Ezigbo ike na-agwụ anyị ma anyị mechie ọrụ n’ụbọchị ọ bụla. N’ihi ya, anyị na-agụgharị ihe ahụ n’ụtụtụ echi ya mgbe isi ka jụrụ anyị oyi. Izu ole na ole gachaa, ndị na-edere anyị ihe na-ezitere anyị ihe ndị ha chọrọ ka a gbanwee n’ihe ndị ha ziteere anyị na mbụ. Anyị na-emeda obi gụgharịa ihe ahụ anyị sụgharịrị, ma dezie ihe ndị e kwesịrị idezi na ya.”
Ò nwere ihe ndị dị na kọmputa na-enyere unu aka?
“Nke bụ́ eziokwu bụ na kọmputa anaghị arụ ọrụ ndị nsụgharị na-arụ. Ma, Ndịàmà Jehova arụpụtala ihe ndị ha tinyere na kọmputa na-enyere ha aka ma ha sụgharịwa ihe. Otu n’ime ha bụ ebe anyị na-etinye ma okwu ndị anyị na-edekarị ma ihe okwu Bekee dị iche iche pụtara. Nke ọzọ bụ ebe anyị na-etinye ihe ndị anyị sụgharịrịla. Ọ na-enyere anyị aka ịchọta otú e si sụgharịa ihe ndị nwere ike isiri anyị ike ma ọ bụrụ na o nweela mgbe a sụgharịrị ya.”
Olee otú obi na-adị unu maka ọrụ a unu na-arụ?
“Anyị na-ewere ya na ihe ndị anyị na-asụgharị bụ onyinye a ga-enye ndị mmadụ. N’ihi ya, anyị na-agbalị hụ na ihe ọ bụla anyị sụgharịrị ga-abara ndị ga-agụ ya uru. Obi na-adị anyị ezigbo ụtọ ma anyị chọpụta na ihe mmadụ gụtara na magazin anyị ma ọ bụ na jw.org ruru ya n’obi, meekwa ka ọ gbanwee otú na-adịghị mma o si ebi ndụ.”
Uru Ịsụgharị Ihe n’Asụsụ Dị iche iche Bara
N’ụwa niile, akwụkwọ dị iche iche Ndịàmà Jehova na-ebipụta na-abara nde kwuru nde mmadụ uru ma ha gụọ ya n’asụsụ ha. Ọ bụ na Baịbụl ka ha na-esi enweta ihe ndị dị n’akwụkwọ ha, vidio ha, nakwa ihe ndị ha na-etinye na jw.org. Chineke kwuru na Baịbụl na ya chọrọ ka e zie “mba niile na ebo niile na asụsụ niile” ozi ọma ya.—Mkpughe 14:6. *
^ para. 4 A na-ebu ụzọ ede ihe ọ bụla n’asụsụ Bekee tupu a sụgharịwa ya.
^ para. 25 Gaa na www.jw.org ka ị hụ akwụkwọ, ihe ndị a na-egere egere, na vidio n’asụsụ Igbo nakwa n’ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ.
Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
N’ihe karịrị narị asụsụ asaa
Gee Chineke Ntị Ka I Wee Dị Ndụ Ebighị Ebi
Broshọ Ndịàmà Jehova bipụtara
N’ihe karịrị narị asụsụ isii na iri anọ
Magazin Ndịàmà Jehova na-ebipụta
N’ihe karịrị narị asụsụ abụọ na iri ise
N’ihe karịrị otu narị asụsụ
Otu onye Madagaska aha ya bụ Ranaivoarisoa kwuru, sị: “O nwere ọrịa ndị mụ na ha na-alụ. E wezụga na m na-aga ụlọ ọgwụ, ihe ndị m na-agụta na Teta! n’asụsụ m na-enyekwara m aka. Ha enyerela m aka ịna-ejide onwe m ma a kpasuo m iwe. O nwere ihe ndị Teta! kwuru gbasara ụdị nri onye ọrịa kwesịrị ịna-eri nakwa otú o kwesịrị isi na-emega ahụ́. * Emere m ihe ndị ahụ, ahụ́ ana-adịkwu m mma.”
Otu nwaanyị onye India aha ya bụ Janet kwuru, sị: “Dọkịta m na-eji Teta! e dere n’asụsụ anyị akụziri ndị mmadụ ihe ga-eme ka ahụ́ na-agbasi ha ike. Mgbe ọ kụzichara ihe Teta! kwuru gbasara ihe ọgwụ ọjọọ na oké mmanya na-eme n’ahụ́, ọ dịghị anya, ndị ahụ ọ kụziiri ihe ana-ekwu na ihe ahụ Teta! kwuru emeela ka papa ha na-elekọtakwu ha kama ịna-emefusị ego ha ná mmanya.”
^ para. 52 Teta! anaghị ekwu na ọ bụ otú a ma ọ bụ otú ọzọ ka e kwesịrị isi agwọ ọrịa, ma ọ bụ na nri nke a ka nke ọzọ mma. Onye ọ bụla kwesịrị ịtụle ihe ọ bụla ọ gụtara gbasara nri ma ọ bụ mmega ahụ́ nke ọma, jirikwa aka ya kpebie ihe ọ ga-eme.
Otu nwaanyị detaara ndị na-ebipụta Teta! akwụkwọ ozi, sị: “O nwere mgbe nwa m nwoke dị́ afọ asatọ tụfuru pensụl ya n’ụlọ akwụkwọ, ya aga na-ewere nke ụmụ klas ha. Ma, mgbe o lechara vidio dị na jw.org bụ́ Izu Ohi Adịghị Mma n’asụsụ Pọchugiiz, ọ gwara m ihe ọjọọ ahụ o mere. Ọ rịọkwara m ka m soro ya gaa ụlọ akwụkwọ ha ka ọ rịọ ndị ahụ o weere pensụl ha mgbaghara. Mgbe ọ gwachara ha na e nwere vidio o lere mere o ji weghachi pensụl ndị ahụ, onye nkụzi ha kwuru ka a kpọnyere ụmụ klas ha niile vidio ahụ. Mgbe ha lechara ya, ọtụtụ n’ime ndị klas ha kwuru na ha agaghị ezu ohi ọzọ.”
Ihe E Ji Amụ Asụsụ
N’afọ 2014, Ndịàmà Jehova mepụtara ihe a na-akpọ JW Language. Mmadụ ga-ejili ya mụta otú ọ ga-esi zie ndị ọzọ ozi ọma n’asụsụ Bekee, Bengali, Chaịniiz, French, Hindi, Indonishan, Ịtalian, Jaman, Japaniiz, Korian, Mianmaa, Pọchugiiz, Rọshịan, Spanish, Swahili, Taị, Tigalọg, na Tọkish. Ị chọọ ịmatakwu ihe ndị ọzọ banyere JW Language a, gaa na jw.org ma denye “JW Language” n’ebe e si achọ ihe.